Qoyska Ugu Balaadhan Aduunka
USA, 11 Nov 2012 (Alldhooftinle.com)
Ziona iyo Qoyskiisa oo dhan 181 qof oo ayku jiraan 39kiisa xaas oo da'doodu u dhexeyso 70 ilaa 33 jir waxay maalintii cunaan 33 digaag ah, 50 kiiloo oo baradho ah iyo 25 kiiloo oo bariis ah.
Ziona iyo 39kiisa xaas oo da'doodu u dhexeyso 70 ilaa 33 jir..
Ziona Chan wuxuu ku nool yahay magaalada Baktwang oo ka tirsan gobolka Mizoram ee dalka Hindiya. Ziona wuxuu leeyahay 39 xaas, 94 caruur ah, 33 awoowe ayuu yahay, 13 gabdhoodna sodog ayuu u yahay. Weliba laguma darin caruurta ay gabdhiisu dhaleen oo 68 ah maadama aanay meel la deganayn.
Ninkan oo ah Kiristaan wuxuu madax ka yahay kaniisada magaalada uu ku nool yahay, wuxuu kale oo leeyahay nijaarad lagu sameeyo alaabta guryaha iyo beero aan wixii ka soo baxa la iibin balse qoysku ka dhigtaan nolol maalmeed.
Ziona iyo Qoyskiisa oo dhan 181 qof.
Waxaa yaab leh in ninkan cajiib ka ah hal sano gudeheed guursaday 10 dumar ah, wuxuu kaloo sheegay inuu weli guurdoon yahay uuna rajaynayo inuu ugu yaraan 5 dumar ah guursado intaanu gaboobin. isagoo weliba sheegay inuu aad u danaynayo haweenka Mareekanka sidaa darteedna uu jecel yahay inuu booqdo Maraykanka.
Qoyskan balaadhan oo hal meel ku wada nool ayaa waxaa maalintii lagu kariyaa guriga Ziona 33 digaag ah, 50 kiiloo oo baradho ah iyo 25 kiiloo oo bariis ah.
181ka qof oo gurigan degani waxay dhamaantood ka qayb qaataan horumarinta qoyskan balaadhan, iyadoo ciyaalku tagaan iskuul qoyskan u gaar ah, dhalinyaraduna ka shaqeeyaan beeraha iyo xoolaha halka xaasakiisuna ka shaqeeyaan guriga iyo cunta karinta.
Gurigan oo ka kooban 100 qol waxaa degan Zioana iyo qoyskiisa.
Ugu danbayntiina Ziona ayaa lagu muransan yahay caqiidadiisa, maadaama Kiristaan badani ku doodayaan in aanay diinta Kiristaanku shuqul ku lahayn sida ninkani u dhaqmayo. Laakiin Ziona ayaa ku doodaya in Ilaahay qadaray oo amray inay sidaa arimuhu u dhacaan.